China Anodhura mugadziri we-mvura-okisijeni-nitrogen-argon-yekugadzira-chirimwa vagadziri uye vanotengesa | KANA
Anodhura mugadziri we-mvura-okisijeni-nitrogen-argon-yekugadzira-chirimwa
Isu tinotora akasiyana mapakeji nzira zvinoenderana nezvinodiwa. Akaputirwa mabhegi uye mabhokisi emapuranga anowanzo shandiswa kusaisa mvura, guruva-chiratidzo uye kushamisika-chiratidzo zvinangwa, kuve nechokwadi chekuti yega michina inoramba iri mumamiriro akakwana mushure mekusununguka.
Panyaya yekugadziriswa kwezvinhu, kambani iyi ine imba yekuchengetera hombe uye yakasarudzika 800 tani yemari yakazvimiririra wharf. Tinogona kununura mazana mashanu ematani eakakura cargos zvakananga kuburikidza nemukoto kuShanghai port. Isu tinewo akawanda emigwagwa mikuru padyo nesu yekutakura kwepasi.
1.Oxygen kuburitsa: 10Nm3 / hr-60,000Nm3 / hr
- Giredhi: Maindasitiri kana ekurapa oxygen
- Oxygen kuchena: 99.6%
- Nitrogen kuburitsa: 10L-60000Nm3 / hr
- Kuchena: 5PPm O2, 10PPm O2
- Argon kuburitsa: zvakanyanya sezvinobvira
- Argon kuchena: 99.999%
- Kumanikidza kuri sekukumbirwa nevatengi
1.Full yakaderera kumanikidza yakanaka kuyerera kuwedzera nzira
2.Full yakaderera kumanikidza backflow yekuwedzera maitiro
3.Full yakaderera kumanikidza maitiro ne booster turboexpander
Pashure: Industrial Scale PSA Oxygen Concentrator Oxygen kugadzirwa Kwekudyara zvine zvitupa
Zvadaro: Cryogenic yepakati saizi yemvura okisijeni gasi chirimwa Liquid Nitrogen Dyara
Liquid Nitrogen jenareta
Liquid Oxygen jenareta
Liquid Oxygen Kuparadzanisa Midziyo
Chigadzirwa Mabhenefiti 1.Simple kumisikidza uye kugadzirisa nekuda kwemodular dhizaini uye kuvaka. 2.Fully zvoga hurongwa kuti nyore uye hwakavimbika oparesheni. 3.Guaranteed kuwanikwa kweiyo yakachena-yakachena maindasitiri magasi. 4.Guaranteed nekuwanikwa kwechigadzirwa mune yemvura chikamu chinofanira kuchengetwa kuti chishandiswe panguva chero yekuchengetedza ...
Chigadzirwa Mabhenefiti 1: Iyo dhizaini yemuti uyu ndeyekuchengetedza kuchengetedzwa, kuchengetedza simba uye nyore kushanda uye kugadzirisa. Iyo tekinoroji iri kutungamira chinzvimbo munyika. A: Mutengi anoda yakawanda yekugadzira mvura, saka isu tinopa yepakati kumanikidza mweya yekudzokorora maitiro ekuchengetedza iyo mari uye simba rekushandisa ....
Chigadzirwa Mabhenefiti 1.Simple kumisikidza uye kugadzirisa nekuda kwemodular dhizaini uye kuvaka. 2.Fully zvoga hurongwa kuti nyore uye hwakavimbika oparesheni. 3.Guaranteed kuwanikwa kweiyo yakachena-yakachena maindasitiri magasi. 4.Guaranteed nekuwanikwa kwechigadzirwa mune yemvura chikamu chinofanira kuchengetwa kuti chishandiswe panguva chero yekuchengetedza mashandiro. 5.Kuderera kwesimba co ...